Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guatemala » Dalxiiska Guatemala iyo Cancun ayaa noqday mid aad u sahlan
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Guatemala • Wararka Mexico • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Guatemala waxay u soo ifbaxday inay xuddun u tahay Bartamaha Ameerika, taasoo abuureysa isku -xirnaanta Mexico iyo wixii ka dambeeya. Magaalada loo tamashlaha tago ee Meksiko ee Cancun ayaa hadda si fudud looga gaari karaa Guatemala, Honduras iyo wixii ka dambeeya, iyadoo la furayo iskaashiga dalxiiska ee labada dal.
Tan waxaa mahad leh TAG Airlines, oo ah side Guatemala oo casri ah.
TAG Airlines waxay hawlaheeda ka bilaabi doontaa Meksiko laga bilaabo Ogosto, iyada oo duulimaadyadu ku xirmi doonaan magaalooyinka Guatemala iyo Tapachula, laga bilaabo 13 -ka Ogosto, iyo Guatemala iyo Cancun, laga bilaabo Ogosto 19.
Rakaabku waxay yeelan doonaan ikhtiyaarka duulimaad toos ah oo lagu dhimayo waqtiyada iyo kharashyada, waddada cusub waxay ka faa'iideysan doontaa dalxiisayaasha iyo basaska u safraya labada meelood.
Guatemala sida Nafta Dhulka iyo sida wadnaha dunida Mayan, waxay bixisaa kala duwanaansho ballaaran oo soojiidasho dabiici ah, qadiimiga, iyo gastronomy, iyo kuwo kale.
Cancun waxay u soo ifbaxaysay sidii goob dalxiis oo ku taal Meksiko oo kaliya maahan dadka Mareykanka laakiin booqdayaasha dhammaan Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika, iyo sidoo kale Yurub.
Ku -xiridda Cancun iyo Tapachula waa horumar weyn si loogu xiro Guatemala iyo inta kale ee shabakadda TAG ee Bartamaha Ameerika magaaladan dalxiiska ee Meksiko.
Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) waa rakaab khaas ah iyo diyaarad xamuul oo xarunteedu tahay Zone 13 ee Magaalada Guatemala, xarunteeduna tahay Madaarka Caalamiga ah ee La Aurora. Waxaa lagu aasaasay 1969 Guatemala City
Laga bilaabo 13ka Ogosto, waddada cusub ee Guatemala-Tapachula-Guatemala waxay ka qaybgeli doontaa socdaalka soo socda oo leh shan jeer oo toddobaadle ah:
Flight qorraxda Frequency Jadwalka
220 Guatemala-Tapachula Isniin-Jimce 10: 30-12: 15 saacadaha
221 Tapachula-Guatemala Isniin-Jimce 14: 00-13: 45 saac
Dhanka kale, laga bilaabo Ogosto 19, Jidka cusub ee Guatemala-Cancun-Guatemala wuxuu u adeegi doonaa socdaalka soo socda oo leh afar jeer oo toddobaadle ah:
200 Guatemala-Cún Talaado, Khamiis, Sabti iyo Axad 10: 00-13: 10 saacadaha
201 Cancún-Guatemala Talaado, Khamiis, Sabti iyo Axad 14: 10-15: 20 saac
Julio Gamero, Maamulaha TAG Airlines, wuxuu yiri "gobolka koonfur-koonfur-bari ee Meksiko wuxuu muhiimad weyn iyo soo jiidasho u leeyahay madadaalada iyo socdaalayaasha ganacsiga, quruxdiisa dabiiciga ah, hodantinimadiisa dhaqanka iyo ku habboonaanta uu gobolku u leeyahay kobaca dhaqaalaha."
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan howlo ka bilowno Mexico. Abaabul dhaqaale oo muhiim ah ayaa shaki la’aan noqon doona Tareenka Mayan, kaasoo noqon doona udub-dhexaadka horumarka gobolka koonfur-bari, iyada oo loo marayo abuurista shaqooyin, abuurista maalgashiyo iyo dhiirrigelinta dhaqdhaqaaqa dalxiiska, ”ayuu raaciyay.
Gamero wuxuu u mahadceliyay mas'uuliyiinta Mexico ee Quintana Roo iyo Chiapas si ay u aaminaan, iyo sidoo kale Wasaaradda Dalxiiska ee Federaalka, la -hawlgalayaasheeda ganacsi, iyo Machadka Dalxiiska Guatemalan, oo suurta -gelinaya in la xaqiijiyo xoojinta isku -xirnaanta hawada ee labada ummadood.
TAG Airlines waa shirkad Guatemala ah oo boqolkiiba boqol ah oo muddo 100 sano ah si adag u ilaalinaysay isku xirnaanta hawada iyo horumarinta. Waxay hadda ka hawlgashaa 50 duulimaad oo maalinle ah Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, iyo hadda Meksiko, oo leh diyaarad casri ah oo ka badan 27 diyaaradood.
Intaa waxaa dheer, TAG Airlines waxay leedahay ballanqaad adag oo ku aaddan ilaalinta caafimaadka rakaabkeeda, sidaa darteed dhammaan duulimaadyadeeda waxay ka fulisaa tallaabooyin adag oo nadaafad iyo fayadhowr ah.